Umthandazo onamandla wokuphulukana noloyiko lokuqhuba. ?
Umthandazo onamandla wokuphelisa uloyiko lokuqhubaUkuba uyoyika ukuqhuba, musa ukuba neentloni okanye ukhathazeke, kuba olu loyiko luxhaphake kakhulu kubantu abaninzi. Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele ukuba ukuqhuba ngaphandle koloyiko kufuna unyamezelo kunye nokuzimisela. Ke ukukunceda silungiselele iingcebiso ezi-2 kunye kunye Umthandazo wokuphelisa uloyiko lokuqhuba. Ngaba unomdla wokufunda? Ke jonga apha!
1 Umthandazo onamandla wokuphelisa uloyiko lokuqhuba
1.1 Iingcebiso malunga nendlela yokuphelisa uloyiko lokuqhuba wedwa
1.2 Indumiso yokuphelisa uloyiko lokukhokelela kuThixo
2 Imithandazo emi-3 enamandla yokuphelisa uloyiko lokuqhuba
2.1 Umthandazo onamandla wokuphelisa uloyiko lokuqhuba
2.2 Umthandazo wokuphelisa uloyiko lokuqhuba kuzuko lukaThixo
Iingcebiso malunga nendlela yokuphelisa uloyiko lokuqhuba wedwa
Ingcebiso 1 - Ziqhelise nanini na unako-awuyi kuvuka ngobusuku, ungene emotweni okanye ubethe indlela, ayisebenzi ngaloo ndlela. Into ekufuneka uyenzile kukuziqhelanisa nokuzibekela iinjongo. Qhuba ujikeleze ibhloko ukuqala, emva koko wandise umgama, emva koko uzame ukutyelela umhlobo osuka komnye ummandla, ukuze uhlale uhamba umgama ongcono. Qala ngokulandela iingcebiso zokuba ungalahla njani uloyiko lokuqhuba, oluhamba kunye Umthandazo wokuphelisa uloyiko lokuqhubaBaza kukunceda.
Ingcebiso 2 - Musa ukuqhuba ecaleni kwabo bakucinezelayo: Nabani na ofuna ukuqhuba ngaphandle koloyiko uyazi ukuba kubi kangakanani ukuba secaleni komntu okhalaza ngendlela aqhuba ngayo athi olu loyiko bubudenge. Lahla uloyiko lwakho lokuqhuba ngokuphepha ukushiya ixesha lakho elisexesheni. Ukulandela eli cebiso lokuba ungalahla njani uloyiko lokuqhuba kwaye uthandaze ukuba ulahlekelwe luloyiko lokuqhuba kuya kwenza kube lula yonke imihla ukuphulukana nolo loyiko.
Indumiso yokuphelisa uloyiko lokukhokelela kuThixo
“Nkosi Thixo wothando, ndiyazi ukuba andidalelwanga uloyiko, kungoko ndizisa lonke uloyiko lwam, ngakumbi uloyiko lwam lokuqhuba.
Ndiyoyika ukuqhuba, ndiyoyika ukugcwala, ukwebiwa kwezithuthi, ukwenzakalisa umntu xa ndiqhuba.
Ngezi zizathu, ndibonisa lonke uloyiko lwam kwaye ndicela ubuze kuwe ukuze undincede ndizoyise.
Yiza uzondiphilisa, Yesu. Yiza undifundise ukujongana nolo loyiko ngaphambi kokuba luzise intshabalalo ebomini bam. Hlaziya intliziyo yam, Yesu.
Ndiyazi ukuba uxolo sisiqhamo soMoya oyiNgcwele, ngoko ke ndifuna amandla akho ukujongana neemeko ezoyikisayo ukungena emotweni kunye nokuqhuba.
Ndidinga ukujongana nolo loyiko lundithintele ukuba ndingene emotweni yam ukuqhuba, Nkosi.
Yile nto ndiyicelayo egameni lakho nakumandla oMoya oyiNgcwele.
Ndiyathanda, Nkosi, ukuvumela ubomi bam ukuba bukhululeke kolu loyiko.
Ndiyanikezela, Bawo, lonke uloyiko, zonke iimeko zoloyiko kunye noloyiko, uloyiko lokujongana nokugcwala kwetrafikhi, ukuze iNkosi isincede, isiphilise kwaye isikhulule kwesi sifo.
Ndihlangule, Nkosi Yesu, kulo lonke uloyiko lwesifo xa ndiqhuba.
Yiza uphilise ngaphakathi kum, Nkosi Yesu, uloyiko luka ukufa, ukoyika ingozi, ukoyika ukubandezeleka okubangelwa ngabanye abantu.
Yiza Nkosi Yesu. Yiza unikezele ngokuchukumisa kwentembelo entliziyweni yam, engqondweni yam. Nguwe kuphela onokufumana oku.
Nkosi yiza ukuphilisa lonke uloyiko lwam, iihemesti zam ezihlala zithintela ukuba ndingene emotweni ukuze ndiqhube.
Ndichukumise, Nkosi! Thulula uMoya wakho oyiNgcwele kum ngesipho sokuthembela, ukophula, Nkosi, lonke uloyiko olunxulumene nemoto kunye nokuhamba kweemoto.
Ndifuna ukuba ndikhululeke kolu loyiko luye lwandikhathaza kukungazithembi okukhulu.
Ndihlambe ngegazi lakho kwaye ndikhulule. Amen!
Imithandazo emi-3 enamandla yokuphelisa uloyiko lokuqhuba
Umthandazo wokulahleka uloyiko lokuqhuba uyasebenza kwaye kufuneka wenziwe ngokholo olukhulu, kuba ukuqiniseka ngenkululeko kuqinisekile. Ukukunceda ukoyise uloyiko, silungiselele izivakalisi ezi-3, yenza eyona ichukumisa kakhulu intliziyo yakho.
Umthandazo wokuphelisa uloyiko lokuqhuba egameni leNkosi
“Nkosi Yesu, kusemagameni akho anamandla, ngoku ndiyaluphelisa uloyiko lokuyalela zonke iindlela zoloyiko ezinokuthi zilifumane njengelifa izalamane zam. Ndithatha igunya kulo lonke uloyiko lokuqhuba. Nkosi Yesu, kwigunya leGama lakho, nditsho koloyiko lokuqhuba. Nkosi yazisa usapho lwam kwizizukulwana zonke ukuba akukho loyiko eluthandweni.
Ngamana uthando lwakho olugqibeleleyo lungazalisa imbali yosapho lwam ukuze zonke iinkumbulo zoloyiko lokuqhuba ziyeke ukubakho.
Ndiyakudumisa kwaye ndiyabulela ngokuqiniseka ukuba ngexesha lakho, Nkosi, ndiza kukwazi ukuqhuba. Amen!
“Nkosi yam Thixo wam notata, ndiza phambi kwakho ngalo mzuzu ndizokucela ukuba undincedise ngalo mzuzu. Bawo, uloyiko lufuna ukundikhathalela kwaye andikwazi kuzibamba, ndiyayicela iNkosi ukuba ize kundinceda kwaye indikhusele. Ndiyazi ukuba uloyiko alungolwakho kwaye, ngenxa yoko, andifuni lo mvakalelo woyika kwaye nokuba uloyiko ebomini bam. Kwaye ke ndinyusa ilizwi ngoku ngokuchasene nabo bonke ububi obusebenza engqondweni yam, ukunqanda kum ukuqhuba kwaye ndiyathi: woyika ukuqhuba, phuma ebomini bam ngoku! Amen kwaye ndiyabulela kuThixo.
Umthandazo wokuphelisa uloyiko lokuqhuba kuzuko lukaThixo
“Ngelizwi lakho ithi ukuba siyakholelwa ukuba siza kulubona uzuko lukaThixo, Bawo, ndiyathandaza kuba ndiyakholelwa ekubonakalisweni kobuqaqawuli bakho. Ndinengxaki yokoyika ukuqhuba, kususa uloyiko lwam kwiingozi, iintlekele, ukubiwa kweemoto kunye nokufa ezindleleni. Ndicela ukungenelela kwakho okuvela ngqo ezulwini. Ndiyakholelwa kuwe. Beka izandla zakho phezu kwam kwaye ususe olo loyiko, nguwe kuphela onokuyenza. Amen "
Ngoku ekubeni usazi isivakalisi ukuba ulahlekelwe kukoyika ukuqhuba, jonga kwakhona: